Zụta laptọọpụ ọhụrụ ma ọ bụ jiri ya - nke ka mma | TeraNews.net
Zụta laptọọpụ ọhụrụ ma ọ bụ jiri ya - nke ka mma
na-ede akwụkwọ Nikitin Eugenius E bipụtara 26.08.2021
N'ezie, ọ ga-aba uru mgbe niile ịzụta laptọọpụ nke abụọ. Ozugbo onye nwe mbụ tọpụrụ igbe nke ngwaọrụ ọhụrụ, ọ na -efufu 30% ozugbo na ọnụahịa. Atụmatụ a na -arụ ọrụ maka smartphones, mbadamba na ngwa ndị ọzọ. Ọ bụ naanị n'oge ihe na -adịghị ahụkebe ka onye ọrụ na -ere igwe na -arụ ọrụ nke ọma na ọnụ ala.
Azịza nye ajụjụ a ga -abụ otu mgbe niile - laptọọpụ ọhụrụ na -aka mma mgbe niile n'ihe gbasara oke ọnụ ahịa. Enweghị mgbagha ọ bụla iji ree ngwa ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma na ọnụ ala. Mgbe irechara laptọọpụ, onye ọrụ kwesịrị ịzụta nke ọhụrụ. Mgbe ahụ ihe mere o ji na -ere nke ochie apụtachaghị.
N'ahịa, a na-enye anyị onyinye pụrụ iche-laptọọpụ nwere ihe nrụpụta Core i5 na Core i7. A kwadebere akụrụngwa ahụ nnukwu RAM ma nwee diski SSD. Mana kedu ihe bụ ọghọm nke ụdị ndị a. Nke a bụ ihe:
Chipset ochie. Lezienụ anya na ọkọlọtọ ndị a niile nwere nhazi nke abụọ, nke atọ, na-adịkarịghị ọgbọ 2-3. Nke ahụ bụ, teknụzụ dịkarịa ala afọ 4. Anyị makwaara nke ọma na ndị nrụpụta anaghị ahapụ ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị ọnwa 5. Otu Microsoft a jụrụ na -akwado ịkwado ibe ochie.
Ekwekọghị n'etiti ikpo okwu na ngwanrọ. Bido na mmemme OS na ọfịs, na -ejedebe na ihe nchọgharị. Ndị na -emepe emepe na -achọ akụrụngwa ọhụrụ. N'ihi ya, ngwaike niile dị na laptọọpụ enweghị ike igosipụta arụmọrụ.
Enweghi ike ime nke ọgbara ọhụrụ. Ee, laptọọpụ dịkwa nkwalite. Ị nwere ike re-solder processor na mụbaa I / O mbadamba. Mana a na -enye anyị ọkọlọtọ nke ọgbọ ochie. The motherboard anaghị akwado ọgbọ nke nhazi.
Kedu ọghọm dị na laptọọpụ ejiri
Ebe adịghị ike nke laptọọpụ ọ bụla bụ ihuenyo LCD. Ọbụna matriks IPS nwere mkpebi FullHD na -ere ọkụ. Na maka afọ 8-10, ekwesighi ịtụ anya mmeputakwa agba na nchapụta. Kedu ego echekwara n'ịzụta laptọọpụ ejiri - imebi anya gị. Nke a bụ mgbanwe na -ahaghị nhata.
Laptọọpụ ndị okenye, n'agbanyeghị na ha na -akwado draịva SSD, nwere bandwidth ụgbọ ala dị ala. Na mgbakwunye, ọtụtụ laptọọpụ na -eji modulu RAM ochie. Ọbụna 16 GB agaghị azọpụta onye ọrụ ma ọ bụrụ na o kpebie ịgbasa.
Kedu ụdị kọmpụta eji eme ihe ị nwere ike ịzụta
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịzụta laptọọpụ dị mkpa n'ihe gbasara akụrụngwa na ọnụ ala. Anyị na -ekwu maka ọtụtụ ma ọ bụ obere sistemụ ọgbara ọhụrụ. Ndị a bụ ndị nhazi AMD Ryzen na Intel 8th Gen na karịa. Ndị egwuregwu na -erekarị laptọọpụ ndị a na -achọ arụmọrụ sistemụ kacha. O doro anya na a ga -enwe kaadị eserese pụrụ iche n'ụgbọ ahụ, ọnụ ahịa ya ga -adịkwa elu n'ihi nke a. Mana laptọọpụ dị otú ahụ nwere ike bụrụ ezigbo ngwọta karịa ọbụna новый... Ngwa ndị dị otu a, n'ahịa nke abụọ, agbabiri.
Ọzọkwa, a na -eresị kọmpụta ndị eji eme ihe ụlọ ọrụ na -emechi ọfịs ha. Ihe a na-ahụkebe dị obere, mana ebum n'uche ya nke ọma. N'okwu a, ị nwere ike zụta laptọọpụ ọgbara ọhụrụ, ọbụlagodi na onye nrụpụta ike dị ala. Site n'ịkwụtụkwu ntakịrị, ụlọ ọrụ ga -ere ihe na -arụpụta ihe karịa ebe ahụ. Ihe si na ya pụta bụ nchekwa dị mma maka onye zụrụ ya.
Mbadamba ụrọ ma ọ bụ laptọọpụ nwere ihuenyo mmetụ
Laptọọpụ Nokia Purebook S14 - ụlọ ọrụ anaghị eme nke ọma
Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 (2021) - laptọọpụ egwuregwu
Teclast TBolt 10 - laptọọpụ na nri dị jụụ
Obere igwefoto X2 maka ụmụaka abụghị igwefoto ụmụaka ma ọlị
Kedu TV ka mma ịzụta - 4K ma ọ bụ FullHD
LG DualUp - Nyochaa nwere akụkụ 16:18
Garmin Venu 2 Plus - ihe ọhụrụ na ahịa smartwatch
Azụ siri ike na nkecha mara mma maka ụmụ akwụkwọ
Ndị mmadụ na-enwe ike ịchọpụta ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa ahụ
REMOTE G21 PRO: nnyocha, nkọwapụta
Usoro ịgba: ụdị ikuku ntụ oyi, otu ịhọrọ